Gangtok Lachung Pelling Tour Package | Antsoy @ + 91-993.702.7574 ho an'ny fandefasana.
Ny fanalavirana ny hustle ao an-tanàna dia ny fomba tsara indrindra haka fotoana lavalava ary hiala sasatra. Ny fitsangatsangana any amin'ny havoan-dàlana dia ny tsara indrindra ho an'ny aura. Ny Gangtok Lachung Pelling Tour Package dia hamela anao hijery ny hatsaran-tarehy tsy manam-paharoa amin'ireo tendrombohitra tsara tarehy sy ny landscapes. Ny tontolo malaza sy mangatsiaka miaraka amin'ireo monasitera malaza dia nanorina tranon-trano fahiny ary ireo mponina tsy manan-tsiny dia hamela anao hino fa tonga any amin'ny paradisa ianao. Ny aventure, ny natiora, ny spiritisma, ny fiadanana ara-kolotsaina sy manan-danja indrindra, Sikkim dia iray amin'ireo toerana mety hiantsoan'ny olona sasany ho marina. Na izany aza, mbola misy ny zava-misy, misy ny toerana tsy mampino tahaka an'i Sikkim izay manatanteraka ny fanirian'ny mpandeha iray mavitrika. Ny Gangtok Lachung Pelling Tour Package dia handrakotra ireo faritra malaza sy fiantohana rehetra hitondra anao amin'ny dian-tongotr'ireo tanimboly iray izay ahitana ny tontolon'ny tany sy ny toerana ary ny toeram-pitsaboana fa tsy mety hiverina. Ao amin'ny dianay dia hisy fitsidihana an-toerana mankany an-toerana mankany Gangtok. Handeha ho any Lachung ihany koa izahay, izay mirehareha momba ny Lohata-dian-dra mivoatra any amin'ny Lohasahan'i Yumthang. Ny hakanton'ity toerana ity dia toy izany ka mety hamontsina ny fo. Ny toerana misy ny 3598m ambonin'ny haavon'ny ranomasina dia mahatonga izany ho an'ny toerana izay mety handehananao mandritra ny ora maro. Lavitry ny vahoaka madding, ity toerana ity dia mipetraka eo amin'ny sehatry ny natiora ary miantso anao hanao toy izany koa. Misotroa-divay sy lembalemba mahafinaritra miparitaka manerana ny manodidina. Ny Gangtok Lachung Pelling Tour Package dia hitondra anao any amin'ny tany mahagaga amin'ity vanim-potoanan'ny fialantsasatra ity. Ity diabe 8 andro ity dia hiantoka fa manana fotoana lavalava ianao ary mankafy ny dia mankany amin'ny tena feno. Ny tara-pahavitrihan'ny ranomandry sy ny soavaly miaingan-tsoavaly dia manamboatra izany paradisa Himalayana izany. Fidio ny poketra fitsangatsanganan-tsambo Gangtok Lachung mba hankafizo indray mandeha indray mandeha mandritra ny androm-piainan'ny fiainanao.
07 Nights / 08 Days | Tour Code: 124
DAY 01: FIZAHAN-TANY AN-TANY NJP RAILWAY / IXB
Rehefa tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina Railway NJP / (IXB) Bagdogra Airport, (500Ft / 150Mtrs) dia horaisin'ny manampahefana ao amin'ny birao izay hanampy anao hiakatra ny fiaranao mankany Gangtok (5500 Ft / 1677 Mtrs, 130 Kms / 04 hatramin'ny 05 Hrs) . Fanaraha-maso ary alina ao amin'ny Hotel.
Taorian'ny sakafo maraina, nanomboka ny fitsangatsanganana ho an'ny Tshangu Lake (12400Ft / 3780 Mts / 43Kms amin'ny 3Hrs iray avy any Gangtok) sy Baba Mandir (13100Ft / 3994 Mtrs / 16Kms amin'ny 1Hrs iray avy amin'ny Tshangu Lake) (tsy fidirana ho an'ny vahiny pirenena, afaka avela hitsidika ny Tshangu Lake izy ireo, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana azo ekena. Tsy maintsy manana 02 ihany koa izy ireo ary ambony ny isa mitsidika ny Tshangu). Mipetraka amin'ny haavon'ny 12400Ft / 3780 Mtrs / 43Kms amin'ny 3Hrs amin'ny fomba iray, miaraka amin'ny halalin'ny 50 ft. Ny rano mangatsiakan'ny Farihy dia mifanaraka tsara amin'ny hatsarana malaza manodidina. Miverina any Gangtok ary mihoatra ny alina amin'ny hotely. (Raha misy ny fihotsahan'ny tany na noho ny antony hafa rehetra raha mikatona ny Tshangu Lake dia hisy fizahan-tany hafa azo omena) Nathula (14140 Ft / 4310 Mtrs / 20 Kms amin'ny 1Hrs iray avy amin'ny Farihy Tshangu) Baba Mandir (13100Ft / 3994 Mtrs / 16Kms amin'ny 1Hrs iray avy amin'ny Farihin'i Tshangu) dia sisin-tanin'i Indo China, tarihin'ny tafika Indiana ary mipetraka eo amin'ny 20 Kms mialoha ny Tshangu Lake amin'ny haavon'ny 14140 Ft / 4310. Ny dia mankany Nathula sy Baba Mandir dia mitovy amin'ny 16 Kms. Amin'izao fotoana izao, ny sandriny ankavanana amin'ny "V" izay 4 Kms dia mandray iray ho an'i Baba Mandir ary namela ny sandrin'ny "V" izay 4 Kms dia mandray ny iray mankany Nathula. Afaka misafidy ny Nathula Excursion amin'ny alalan'ny fandoavam-bola fanampiny izay miovaova isam-bolana. Ny fanomezan-dàlan'i Nathula dia nahazo fanamafisana ny hetsika 24 alohan'ny vanim-potoanan'ny dia ary omena fahafahana azo omena araka ny nomena azy isaky ny loteria. Nifarana ny alatsinainy sy ny talata ho an'ny mpizaha tany i Nathula. Ny fikarakarana ny fahazoan-dalana amin'ny fotoana farany dia tsy azo atao ary ny varavarankelin'ny 72 Hrs miaraka amin'ny antontan-taratasy ilaina dia ilaina hikarakarana ny fahazoan-dàlana. Ho fanamafisana ny fahazoan-dàlana dia mitaky ny 04 Passport Size Photograph sy ny karatra famantarana ny porofo toy ny Voter Id / Passport / Driving License. Ny karatry ny Pan sy ny karatra Aadhaar dia tsy raisina ho porofon'ny maha-izy azy avy amin'ny manampahefana. Tsy misy fialan-tsasatra, raha toa ny fahazoan-dàlana hanamarina ny fizahantany Sikkim ary noho ny antony rehetra (ny fihotsahan'ny tany, ny rotsak'orana, ny hetsiky ny VIP, ny olana ara-pahasalamana sns ...) dia tsy afaka mitsidika azy.
Fidio avy ao Gangtok Hotel ary alefaso any Lachung (8000 Ft / 2439 Mtrs / 124 Kms / 05 ½ hatramin'ny 06 ½ Hrs). Eo am-pizarana ny fitsidihan'i Tashi, ny rian-drano fito (sedanin'ny fiara no mitondra ny lalana mahazatra). Ny alina.
DAY 04: LACHUNG - YUMTHANG - LACHUNG
Ny maraina dia mandalo fitsangatsanganana mankany Yumthang Valley (11800 Ft / 3598 Mtrs / 25 Kms / 1 ora ½). Ny fitsidihana an'i Yumthang dia fitsangantsanganana androany avy any Lachung, izay fialamboly ho an'ny mpizahatany mitsidika an'ity faritra ity. Ny fiangonan'ny Singba Rhododendron kolontsaina dia mivelatra eo anelanelan'ny Aprily ka hatramin'ny Jona. Ny tara-pahavitrihan'ny ranomandry sy ny soavaly miaingan-tsoavaly dia manamboatra izany paradisa Himalayana izany. Ny lohasaha dia fantatra ihany koa amin'ny lohataona Hot. Na dia maloto aza ny rano dia maro ireo mponina avy ao amin'ny faritra no mitsidika ny tenany mba hitafy sy hanasitrana araka ny inoana. Ny alina. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Open book 01.svg Anarana Sikkim Lachen Kaominina frantsay, ao amin'ny departementan'i l'Oise. Lachung. Ireo vahiny vahiny dia mahazo mitsidika an'i Yumthang, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana marina). Ny fitsangatsanganana Yumesamdong dia azo ampiasaina amin'ny fandoavam-bola fanampiny amin'ny INR 15300 isaky ny fiara. Yumesamdong any ivelan'i Yumthang. Ny dia avy any Yumthang dia mamakivaky ny lalana midadasika. Ny fofom-pofona mamy nataon'i Ezilia dia manenika ny rivotra. Ezilia dia zavamaniry ampiasain'ny mponina mba hamokarana hazo fisaka. Ho fanamafisana ny fahazoan-dàlana dia mitaky ny 4665 Passport Size Photograph sy ny karatra famantarana ny porofo toy ny Voter Id / Passport / Driving License. Ny karatry ny Pan sy ny karatra Aadhaar dia tsy raisina ho porofon'ny maha-izy azy avy amin'ny manampahefana. Tsy misy fialan-tsasatra, raha toa ny fahazoan-dàlana hanamarina ny fizahantany Sikkim ary noho ny antony rehetra (ny fihotsahan'ny tany, ny rotsak'orana, ny hetsiky ny VIP, ny olana ara-pahasalamana sns ...) dia tsy afaka mitsidika azy.
Fandefasana any Gangtok. Teny an-dalana, jereo ny riandrano Bhim Nala. Ny alina.
DAY 06: GANGTOK - PELLING
Mandritra ny halaviran-dalana (04 hrs), mitsidika ny riandranon'i Water Jhakri miaraka amin'i Droul Chorthen, Fikarohana momba ny Tibetology (Nakatona ny Alahady), Direction of Handicraft and Handloom (Closed on Sunday) ary Flower Show. Ny famindrana ny tolakandro amin'ny Pelling (6100 Ft / 1860 Mtrs, 116 Kms / 05 hatramin'ny 06 Hrs). Ny alina.
Rehefa avy misakafo maraina isika dia mitondra mankany Yuksom (5840 Ft / 1780 Mtrs, 35 Kms / 02 Hrs) amin'ny fomba fahitana tsara tarehy an'i Darap Village, Rimbi Waterfall sy Hydro Project, Lake Khecheopalri (6000 Ft / 1829 Mtrs), iray amin'ny Bodista masina any amin'ny farihy tendrombohitra ary heverina fa marina izay rehetra tadiavina mialoha ny farihy. Ny anganongano dia hoe rehefa misy ravina mianjera amin'ny rano madio mangatsiatsiaka, dia nalain'ny vorona sy ny riandrano Kanchanjunga. Misy fiara hafa mitondra anao any Yuksom (toerana misy ny moanina telo) - renivohitr'i Sikkim. Io no toerana izay nantsoina hoe Chogyal (mpanjaka iray any Sikkim). Miverina eny an-dalamby sy mamakivaky ny hotely.
DAY 08: PELLING - ARRIVAL NJP RAILWAY / IXB AIRPORT
Fandefasana any amin'ny Railway Station NJP / (IXB) Airport Bagdograog, (150 Kms / 05 hatramin'ny 06 Hrs) ho an'ny fifandraisana eo an-dàlana.